I-Lapininib ephuzi (231277-92-2) HPLC≥98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Abanye / I-Lapatinib
I-AASraw inokukwazi ukwenza kanye nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-oda elincane le-Lapatinib (i-CAS 231277-92-2), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
I-Lapatinib powder umuthi olwa nomdlavuza owenziwe nguGlaxoSmithKline (GSK) njengokwelashwa kwezicubu eziqinile ezifana nomdlavuza webele nesifuba. Yavunywe yi-FDA ngo-March 13, i-2007, ukuze isetshenziswe kwiziguli ezine-methrase ye-breast metastatic advanced ngokubambisana neCopecitabine yezidakamizwa zamakhemikhali. I-Lapatinib iyinhlangano ye-epidermal yokukhula ye-factor receptor uhlobo 2 (HER2 / ERBB2) kanye ne-epidermal ukukhula factor factor (HER1 / EGFR / ERBB1) i-tyrosine kinases inhibitor. Ihlanganisa isizinda se-intracellular phosphorylation ukuvimbela i-receptor autophosphorylation phezu kwe-ligand yokubopha.
I.Lapatinib Izici eziyisisekelo:
I-Melt Point: I-137-139 ° C
Isitoreji Sokugcina: I-4 ° C
II. Ukusetshenziswa kwe-Lapatinib (231277-92-2) kumjikelezo we-steroids
I-Lapatinib (i-CAS 231277-92-2), igama lebhizinisi nguTykerb, iTyver.
I-2. Ukusetshenziswa kweLatatinib:
I-1) I-Lapitinib iyithebhulethi okufanele ithathwe ngomlomo.
I-2) Amathebulethi afika ngobukhulu besilinganiso se-1, i-250mg.
I-3) Thatha i-lapitinib njengoba nje efundiswe udokotela wakho.
I-4) I-Lapitinib kufanele ithathwe okungenani ihora elilodwa ngaphambili, noma okungenani ihora elilodwa ngemuva kokudla (thatha isilinganiso esiphelele ngesikhathi esisodwa nsuku zonke, ukuhlukanisa amanani akunconywa).
I-5) Ungadli noma uphuze imikhiqizo yamagilebhisi ngenkathi uthatha iLatatinib (231277-92-2).
6) Uma ulahlekelwa umthamo we-lapitinib, thatha ngokushesha uma ukhumbule ngalolo suku. Uma ulahlekelwa usuku, ungaphindi umthamo wakho ngosuku olulandelayo. Vele uweqe umthamo ongabanjwanga.Vala umhlinzeki wakho wezempilo uma ungaqiniseki ukuthi wenzeni.
I-7) Udokotela wakho angalungisa umthamo wakho we-lapatinib kuye ngokuthi ubekezelela kanjani ukwelashwa.
I-3. Isexwayiso kuLatatinib
I-Lapatinib ingabangela ukulimala kwesibindi okungaba nzima noma okusongela ukuphila. Ukulimala kwesibindi kungenzeka ngemva kwezinsuku ezimbalwa noma sekupheleni kwezinyanga ezimbalwa ngemuva kokuqala ukwelashwa neLatatinib (i-CAS 231277-92-2). Tshela udokotela wakho uma unake noma unezifo zesibindi. Uma uthola noma iyiphi yalezi zimpawu ezilandelayo, shayela udokotela wakho ngokushesha: ukushaya, ukuphuziza isikhumba noma amehlo, umchamo omnyama, ubuhlungu engxenyeni engenhla kwesisu, ukuphuma okungavamile noma ukulimaza, noma izigqoko ezibomvu noma amnyama.
Gcina wonke ama-aphoyintimenti nodokotela wakho kanye ne-laboratory. Udokotela wakho uzoyala ezinye izivivinyo ze-laboratory ngaphambi nangesikhathi somuthi wakho ukuze ubone ukuthi isibindi sakho singonakaliswe noma sonakaliswe i-lapatinib.
Khuluma nodokotela wakho ngezingozi zokuthatha i-lapatinib.
I-Lapatinib uhlobo lohlobo lomdlavuza oluhlosiwe (ukwelashwa kwezinto eziphilayo) okuthiwa i-protein kinase inhibitor (TKI). Kuyinto yokwelashwa okuhlosiwe esetshenziselwa ukwelapha okunamaprotheni amaningi okuthiwa i-HER2 (i-epidermal growth factor receptor 2).
Amanye amakhemikhali webele anesamba esikhulu se-HER2. Babizwa ngokuthi ama-positivecancers angu-HER2. I-HER2 yenza amangqamuzana omdlavuza akhule futhi ahlukane. I-Lapatinib (231277-92-2) ishiya i-HER2 ukwenza amaseli ayeke ukukhula noma afe.
IV. Ungayithenga kanjani i-Lapatinib kusuka ku-AASraw?
Qagela ibhulogi yomkhiqizo oyithandayo:
Indlela yokusebenzisa i-Clenbuterol yokulahlekelwa isisindo Iyini i-nandrolone powder esetshenziselwa izinzuzo / nandrolone?
Yiba ngowokuqala ukubuyekeza "i-Lapatinib" Khansela impendulo
I-Nootropics powder (18)
AmaHormoni aseSifazane (22)
I-Estradiol powder Series (8)
Ukuya ocansini kuthuthukisa amaHormoni (14)
Ukusetshenziswa komuntu (6)
Izidakamizwa ze-PCT (8)
Isidakamizwa se-Alzheimer J147: I-Potent Curcumin eyakhiwe yi-J147 Neurotrophic Compound